TCN-CFM-4C (H32) OEM / ODM toos otomaatikada cuntada quraacda bariiska qado qadada mashiinka iibka - Shiinaha TCN-CFM-4C (H32) OEM / ODM quraacda quraacda quraacda bariiska qado qadada mashiinka iibinta Alaab-qeybiye, Warshad - Mashiinka iibinta TCN
Bogga ugu weyn » Product » Mashiinka cuntada lagu kariyo ee kulul
TCN-CFM-4C (H32) OEM / ODM si otomaatig ah cunno quraac ah bariis qado qashin qado mashiinka iibka
● Iyada oo lagu muujiyo 32-inji ah LCD, fiidiyowyo iyo sawirro qaabab kala duwan ayaa loo ciyaari karaa.
Qaabka iibku waa habka sare u qaadista wiishashka wiish si looga caawiyo boosaska kala duwan ee alaabada la geeyo dekeda.
Pt La qabsado naqshadda heerka caalamiga ah ee MDB, iyadoo la raacayo heerka DEX-ga caalamiga ah, waana la aqbali karaa nooc kasta oo naqshad guud ah oo heer caalami ah.
● Waan aqbali karaa biilalka iyo qadaadiicda, oo wax ku beddeli kara qadaadiicda.
Display Bandhiga muraayadda weyn ee muraayadda, way hubin kartaa dhammaan badeecadaha si caqli gal ah oo sahlan in la isticmaalo.
● Cabirka sanduuqa waa la iibin karaa waxbadan, waafaqiddu waa ka fiican tahay, boosaska kululeynta microwave ee madaxa banaan,
iibinta awoodda bokiska ee bariiska ayaa weyn.
Speed ​​Xawaaraha kululaynta waa afar jeer tan foornada microwave-ka caadiga ah.
Nidaamka xakameynta Microcomputer wuxuu leeyahay weydiin xog-ogaal ah, tirakoob, xisaabinta, ogaanshaha cilada iyo howlaha kale ee maareynta.
Cabbirka badeecadaha waa la beddeli karaa waqti kasta, oo u le'ekaan kara heerar kala duwan oo alaabo kala duwan.
Has Waxay leedahay howsha ilaalinta luminta awooda iyo waxqabadka xusuusta.
Nidaamka kormeerka gaarsiinta heerka qiimeynta heerka.
Protection Hawsha ilaalinta daadashada korantada.
● Ozone dilaa.
Platform Nidaamka maareynta adeegga daruuriga xoogga leh wuxuu hubin karaa macluumaadka iibka iyo heerka uu ku socdo mashiin kasta oo iibgeyn ah internetka waqti kasta iyo meel kasta.
Speed ​​Xawaare sarreeya X, Y wareegis mobilada wareega, nidaamka qaboojinta modular, fududeynta dayactirka khaladaadka.
3.15 sano oo loogu talagalay mashiinnada iibinta.
5.Qarafka soosaarashada in kabadan 150，000 unug.
Bangiga, Supermarket, Airport, boosteejada tareenka, Isbitaalka, Suuqa dukaamada, Park, Zoo, aagga muuqaalka, Farmasiga (dukaanka), Xafiiska, Hoteelka, xarunta tareenka, Dugsiga
Qalabka Xawaalaynta Cunnada Degdega ah
Noocyada 60-160 (marka loo eego cabirka badeecada)
4-70 ℃ (waa la hagaajin karaa)
TCN-FSC-5G (10SP) Mashiinka cuntada yar ee qaboojiyaha ah mishiinka iibinta yogurt qaboojiyaha Mashiinka iibinta smoothie
TCN-D900-7C (49SP) TCN Touch Screen E-Sigaarka Mashiinka iibinta CBD Vape oo leh xaqiijinta da'da
TCN-CFS-11G (V22) + 11V-R TCN Khudrad Caafimaad Fiican oo Mashiinka Quda Marta Salaan ee Muuqaalka Taabashada
TCN-D900-9C (22SP) Mashiinka iibinta khamriga ee khamriga TCN ee leh mashiinka cabirka 22 inch